Japan, 19 Feb 2014(Alldhooftinle.com)
QOF WALBA CIMRIGIISA ALAAH AYAA QADARA, HADDANA WAXAA JIRA IN DALKA JAPAN LOOGA HADHAY KOOBKA CIMRI DHERERKA.
Qof walba cimrigiisa Alaah ayaa qadara, hadana waxaa jira in deegaanka, dhaqanka iyo cuntaduba qayb weyn ka qaataan cimriga qofka. Dalka Japan ayaa looga hadhay xaga cimri dhererka. Nimanka Jabaaniiska ayaa ku dhinta 79 jir halka dumarkuna ku dhintaan 86 jir celcelis ahaan. Dadka ka weyn 65 jir ayaa ah 25% ama rubuc tirada dadka Jabaaniiska ah. 50 sano ka dib waxaa la qiyaasaa inay 40% ka noqon doonaan tirada dadka.
Dadka reer Jabaan lama yaabaan wax weyna uma haystaan in qofku gaadho 100 sano. Saynisyahano badan ayaa ku sheegay sababta Jabaaniisku u cimriyeen inay tahay cuntada ay cunaan oo ah cuntada badda laga soo saaro iyo geedaha cagaaran. Jabaaniiska cuntadooda ayaa 50% waxay tahay cuntada badda laga soo saaro ama seafood, taasoo ay ku yar yihiin subaga iyo kolestaroolka oo aan u wanaagsanayn jidhka baniaadmiga markay ku bataan.
Laakiin arintan cimri dhererka dad baa u arka inay tahay habaar reer Jabaan ku dhacay. Bishii hore ayay ahayd markii wasiirka xagjirka ah ee maaliyadda Taro Aso uu ku taliyey in waayeelku ay doortaan dhimasho maadaama cimrigoodii ay soo qaateen. Wasiirka ayaa sheegey in wasaarada maaliyadu balaayiin ku bixiso dawooyinka iyo xanaanaynta waayeelka. Hadalkaas wasiirka oo dad badan ka caraysiiyey ayuu u bedeley markii danbe inuu u jeeday dadka waaweyn ee aan waxba cuni karin in tuubo lagu quudiyo mooyee.
Wasiirka oo 72 jir ah ayaa sheegey inuu saxeexay warqad uu ku cadaynayo markuu gaboobo in lagu taageero dhimashadiisa, si aanu ugu noolaan nolol gabaw iyo xanuun leh. Dadka waayeelka ah ee keligood nool dalka jabaan ayaa lagu qiyaasaa ilaa shan milyan oo qof, kuwaasoo u baahan daawo iyo ka warhayn joogta ah.
Cabqari Bin Jacfar AlMakhzuumi